Anyị na-enye ngwọta dị irè na mpaghara mmiri
Email Nkwado info@bic-iwhr.com
Kpọọ Nkwado + 86-13911394250
Osimiri Osimiri Mmiri
Simplified Elelu Dam (SED)
Hydraulic Mbuli Dam
Typedị agbaze ọhụụ & Ngwaọrụ （UN）
site ha na 21-07-28
BIC mepụtara ụdị ọhụrụ nke ihe eji agba mmiri na - agbaze na ntanetị. Ọbụna n'oge oyi oyi, ọ gaghị etolite akwa oyi akwa, nke na-edozi nsogbu oyi kpọnwụrụ n'ihu sluice. Ka ọ dị ugbu a, enwere ike iji ngwaọrụ a yana HIC anyị BIC (Hy ...
Mmeri oru ohuru, ihe ohuru ohuru nke imewe
site ha na 21-07-23
N’oge na-adịbeghị anya, BIC meriri mgbazinye ego maka ọdọ mmiri hydrogen abụọ na Jilin Province, China. Otu HED dị 170m ogologo na 2.5m elu; ọzọ HED dị 186m ogologo na 2.5m elu. E wuru HED abụọ a maka ebe ọdịda anyanwụ nke nwere atụmatụ ọkụ mara mma. Ọzọ imewe pụta ìhè nke abụọ ndị a haịdrọlik ele ...
Simplified Ele elu Dam project na Lishu
site ha na 21-05-26
N'ọnwa Ọktọba 2020, ụlọ ọrụ anyị malitere ọrụ mmepe mmepe mmepe Simplified Elevated Dam (SED) na mpaghara mepere emepe nke ụtụ Zhaosutai na Lishu County. Ihe oru ngo a nwere SED ise, nke otu n'ime ya diri 10m n'ogologo na 1.5m elu, ya na otu panel nke 3.33W * 1.5mH, ...
Xi na-ezipụ ozi iji gosi otu narị afọ nke ọmụmụ nna nna Bangladesh, ụbọchị ncheta afọ iri ise
Onye isi ala China bụ Xi Jinping na-eziga ozi vidio na mmemme nke Bangladesh mere na ncheta nke otu narị afọ nna nna ya bụ Sheikh Mujibur Rahman, na-emekwa emume ncheta afọ 50 nke nnwere onwe obodo ahụ na Machị 17, 2021. Na nnọchite Chine ...
Obi ụtọ na Women'sbọchị Ndị Nwanyị Mba！
The Webinar na Hydraulic Elevator Dam （HED） & Simplified Elected Dam （SED）
site ha na 21-02-09
Na Febụwarị 7th, enwere nzukọ ọmụmụ ihe na ntanetị n'ịntanetị nke ọma n'etiti ụlọ ọrụ anyị na Barind Multipurpose Development Authority, gbasara mmiri mbuli mmiri na elele mmiri dị elu. Onye isi oche, onye isi oche na ihe karịrị 50 engineer ...
Nchikota mgbochi mmiri nke hydraulic na isi iyi egwu
site ha na 21-01-08
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị enweela ọganihu dị ukwuu na mmepe nke isi iyi egwu egwu nke kwekọrọ na mmiri dị elu. Enwere ike itinye ya na ahụ ụzọ. Isi iyi na ọkụ na-achịkwa akara nke akara egwu. Ọ bụghị naanị oriri na ọ audioụ -ụ ọdịyo, kamakwa ọmarịcha ntụrụndụ ....
Emume nnabata nke pilot HED pilot na Bangladesh
site ha na 20-10-30
Emere nraranye nke mmiri mmiri mbuli mmiri nke Bhara Shanka ka emere n’abalị iri nke ọnwa iri na otu n’afọ 2020. Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ ugbo na mịnịsta ala, onye ode akwụkwọ nke Mịnịstrị na-ahụ maka ọrụ ugbo, Onye isi oche nke Bangladesh Agriculture Development Corporation bịara mmemme ahụ. Beijing IWHR Co ...
Onye ọrụ 2019 June ga-aga na saịtị Bhora HED Pilot Project
site ha na 20-03-17
Mgbe emechara nrụnye ahụ nke ọma mechara na June, Onye were ọrụ gosipụtara ọganihu saịtị ahụ wee gosipụta afọ ojuju ya na ikpe ikpe (n'okpuru ọkara nchekwa ike) nke mmiri dam. A ga-enyefe oru ngo mgbe oge mmiri ozuzo gachara nke HED (n'okpuru nchekwa ReservoirCapacity).
Julaị 2019, BIC gara na Ministry of Agriculture and Irrigation nke Myanmar
Na mbido ọnwa Julaị, General Chen duuru otu ndị ọrụ nyocha nke BIC ileta osote minista na onye isi nke Ministri Ugbo na Ogbugba Mmiri nke Myanmar. Akụkụ abụọ ahụ kwurịtara ime ka mmekọrịta ha na ngalaba nke mmiri dịkwuo ike. Ndị injinia anyị webatara teknụzụ hydraulic ọhụrụ ...
ya na azụmahịa na-ekpuchi nyocha ọrụ aka, ọrụ na ngwa; mmepe ngwaahịa, mmepụta, ire ahịa na nkwalite, yana iwupụta ọrụ dị mkpa; na ire ahia na ụlọ ọrụ teknụzụ na ngwaahịa.
Typedị agbaze & Ngwaọrụ ọhụụ ...
Xi na-ezipụ ozi iji gosi otu narị afọ nke mmachibido iwu ...